I-8 Bed Mixed Dorm
Ihostela elithokomele elinemibhede engu-24 elizokwamukela ngemfudumalo enhliziyweni ye-Bangkok. Ukuhlobisa okumangalisayo okusetshenziswa kulo lonke ihostela kuhlanganisa idizayini yemboni yaseNew York nezinto ezivela emhlabeni wakudala, kusetshenziswa impahla yakudala, ubuciko, nemibala egqamile. Imiqondo iwukudala umuzwa okhangayo nokhumbulekayo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ihostela linezitezi ezi-5 ezinophahla. Ihostela litholakala ebangeni elihamba ngezinyawo ukusuka eziteshini zaseSurasak BTS, Chong Nontri BTS naseSala Dang(Silom)BTS.
Indawo evamile ethokomele esitezi sesi-4 enovulandi ovulekile nendawo ephezu kophahla ukuze nizihlalele inokubukwa okuhle kwedolobha laseBangkok ebusuku.
Ihostela elithokomele elinemibhede engu-24 elizokwamukela ngemfudumalo enhliziyweni ye-Bangkok. Ukuhlobisa okumangalisayo okusetshenziswa kulo lonke ihostela kuhlanganisa idizayini yemboni yaseNew York nezinto ezivela emhlabeni wakudala, kusetshenziswa impahla yakudala, ubuciko, nemibala egqamile. Imiqondo iwukudala umuzwa okhangayo nokhumbulekayo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ihostela linezitezi ezi-5 ezinophahla. I…